Chibok: Gabdhihii la soo daayay oo eheladoodii ku noqday - BBC News Somali
Chibok: Gabdhihii la soo daayay oo eheladoodii ku noqday
Image caption Gabdhihii la soo daayay oo ehelkoodu ku soo dhawaynayaan xaflad loogu qabtay Abuja
Kow iyo labaatan gabdhood oo ka mid ahaa hablo ay hore uga af-duubteen kooxda Islaamiyiinta ah ee Boko Xaraam magaalada Chibok ee dalka Nigeria ayaa dib loogu celiyay qoysaskoodii.
Xaflad qiiro lahayd oo lagu qabtay caasimadda Abuja, ayaa mid ka mid ah gabdhahaasi ka sheegtay muddo 40 maalmood ah aanay wax cunno ah afka saarin intii af-duubka loo haystay oo ay mar is yidhaahdeen ba waad dhimanaysaan.
Ilaa haatan ma cadda sida soo dayntoodu u suurto gashay, laakiin sarkaal dowladda ka tirsan ayaa sheegay in ay socdaan wadahadallo lagu doonayo in lagu soo furto gabdhaha kale. Ilaa haatan waxa maqan 197 ka mid ah 276 gabdhood ee la af-duubay bishii Abriil 2014.
Gabdhahan ardayda ah ee la af-duubay badankoodu waxay ahaayeen Masiixiyiin laakiin waxa lagu qasbay in ay Muslimaan intii ay gacanta ugu jireen kooxda qafaalatay.
Image caption Boko Xaraam ayaa muuqaalkan gabdhaha ay haystaan ah ka soo saaray fiidyow borobagaado ah oo ay faafiyeen
Maamulka Nigeria wuu beeniyey wararka sheegaya in dagaalyahanno ka tirsan Boko Xaraam oo xidhnaa lagu soo bedeshay hablahan la soo daayay, hase yeeshee sarkaal nabad sugidda ka tirsan ayaa BBC-da u sheegay in afar teliye oo Boko Xaraam ka tirsan la siidaayay.
Image caption Madaxweyne ku xigeenka Nigeria Yemi Osinbajo (midig) oo so dhawaynaya hablihii la soo daayey
Hablaha la af-duubay qaarkood ayay u suurto gashay in ay baxsadaan saacado uun ka dib markii la af-duubay, iyagoo ka booday baabuurtii la saaray oo ku dhuuntay kaynta.
Wararka ayaa sheegaya in laba sannadood iyo dheraad qafaal loo haystay ka dib, khasab na loogu guuriyay dagaalyahannada Boko Xaraam aanay gabdhahaa qaarkood aanay doonayn in ay ku noqdaan eheladoodii.